Homeरोचक / विचित्रज्योतिष शास्त्रः बारअनुसार के गर्दा सफलता मिल्छ ?
January 13, 2020 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on ज्योतिष शास्त्रः बारअनुसार के गर्दा सफलता मिल्छ ?
दैनिक जीवनमा हामीले कैयौं संर्घष गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा केही सफलता त केही असफलता मिल्छ । तर जे काम गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन भने ज्योतिष शास्त्रअनुसार ग्रह दोष निवारण गर्नुपर्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् । यसरी लगातार असफलता हात लागेमा केही उपायहरु अपनाउँदा सफलता मिल्ने विश्वास गरिन्छ । बार अनुसार निम्न उपायहरु अपनाउनुहोस्
आगो निभाउन गएका पिता कहिल्यै नफर्किनेगरि गए ! २० महिनाकी छोरीले गरिन् अलविदा